Izitimela zaseChina zaseMaglev Zokufinyelela i-1000 Km ngehora ngalinye ukuze Zivulwe e-2020 - RayHaber
IkhayaUMHLABAE-ASIA86 ChinaIzitimela zase Maglev zaseChina zifinyelela kwi-1000 Km ngehora ngalinye ukuze Zivulwe e2020
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, E-ASIA, UMHLABA, sesitimela, JIKELELE, Isitimela esisheshayo, HEADLINE 0
Izitimela ezifinyelela ijubane le-km zizofakwa ekusebenzeni
Namuhla, lapho izitimela ezihamba ngesivinini esikhulu zande kakhulu, iChina iyaqhubeka nokusebenza ngokungazelelwe izitimela ezingama-maglev ezethulwa ngumzekelo wazo ezinyangeni ezisanda kwedlula. Kulomongo, izivivinyo zokuqala zizobanjwa ekuqaleni kwe-2020.
I-China bekulokhu kuyizwe elixashile ngesivinini ngokuya ngezitimela. Okwamanje, izwe selivele lisekhaya kwezinye zezitimela ezisheshayo emhlabeni futhi lilungiselela ukuthatha ezokuthutha ngesitimela liye ezingeni lamafilimu eziqanjiwe zesayensi besebenzisa amandla alo okuphehla amandla kazibuthe.
Imibiko yakamuva ithi kuzofakwa ojantshi be-Maglev ezifundazweni eziphakathi neChina, ebezilungiselela eminyakeni edlule, kusukela ekuqaleni konyaka olandelayo. Ngokwalo mbiko, njengamanje abaphathi benza izifundo zokuthi kungenzeka ukuthi bavule lo msebenzi.
Uma konke kuhamba ngokwecebo, uhambo olusuka eGuangzhou, China luya eBeijing lungenziwa ngesivinini esiphakathi kwe-600 km ne-1.000 km ngehora, okusho ukuthi izitimela ezihamba ngesivinini esiphezulu zizotholakala ziphezulu kakhulu kune-350 km / h. Ngaphezu kwalokho, i-Asia Times ithe, ngaphezu kwalokho, ukuthi uhambo lwe-2.200-km ukusuka eWuhan luya eGuangzhou luncishiswe lwaba cishe amahora amabili.
Izitimela zeMaglev, ezithatha wonke amandla ngokusebenzisa isiguqo somoya esisebenza ngozibuthe, sinciphisa ukuxabana kube cishe zero futhi sifinyelele isivinini ebesikade singenakwenzeka. Ijubane elikhulu lezitimela ze-Maglev ezisebenza njengamanje eChina ngamakhilomitha angama-430 ngehora. Kodwa-ke, ngobuchwepheshe obuvuselelwe, la magiya kulindeleke ukuthi afinyelele kuma-600 afike kumakhilomitha angama-1.000 ngehora.
Uma ubheka indawo engaphezulu kweChina, kungenzeka ukusho ukuthi amadolobha akude kakhulu. Ngakho-ke, izitimela ezisebenza nalobu buchwepheshe zenza ukuthi amabanga aphakathi kwamadolobha angabi nalutho futhi acishe awalethele ezingeni elingancintisana nezindiza.
I-China akuyona ukuphela kwezwe emhlabeni elinesifiso sezitimela ze-maglev, kodwa iJapan yayivele yaziwa ukuthi isebenza ezitimeleni zayo zemaglev. Kodwa-ke, isimangalo sakamuva sibonisa ukuthi iJalimane ne-United States nazo zisebenza ngokwazo izinhlobo zezitimela zama-maglev. (Webtekno)
Izinjongo Zezinga eliphezulu Ze-China 1000 Per Hour | maglev 30 / 11 / 2012 I-China Super-Fast Target Target 1000 Mileage Per Hour | I-Maglev Economy ithatha izitimela ezisheshayo kuwo wonke amazwe ekhulayo eChina. I-target kuleli lizwe ukwandisa inethiwekhi kuze kufike i-2020 futhi ukwandise ijubane ku-1000 km Ugesi ngenye yezobuchwepheshe obuhlukile emhlabeni, ikakhulukazi nokungcoliswa kwemvelo. Njalo ngonyaka izinkampani ezengeziwe zikhiqiza futhi zethule amamodeli kagesi noma ama-hybrid. Nokho, kunezinkinga embonini yezimoto ezingenakuxazululwa ngogesi. Njengemoto nemingcele yejubane. Ngakho-ke, amazwe asathuthuka aphendukela ohlelweni lwesitimela olukwazi ukumboza amabanga amade masinyane futhi aluhlanganisi emotweni.
I-China Yethula Umbukiso We-Maglev Isitimela Sokusheshisa I-600 Mileage Ngehora 23 / 05 / 2019 I-China yafaka umzila wesitimela se-maglev, esizohamba amakhilomitha angu-600 ngehora. I-Maglev isetshenziselwa izitimela ezihamba ngaphandle kokuxhumana nemilayezo besebenzisa amandla amakhulu okuphakamisa amandla. I-Central Central Television yaseChina (CCTV), edolobheni laseShandong esifundazweni saseShandong, amakhilomitha angu-600 ngehora ngesivinini somzila wesitimela se-maglev we-line line. Inkampani kahulumeni waseShayina iChina Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) yenze lo msebenzi. IPhini likaMenenja oyiNtloko uDing Sansan uthe lesi sibonelo singakwazi ukuhlola ubuchwepheshe obubalulekile kanye nezici ezibalulekile zezobuchwepheshe zesitimela se-maglev esheshayo. 'UKUQALA OKUQALA' Umthombo wezobuchwepheshe wobunjiniyela bomfanekiso ...
I-1000 Km ngehora ukwenza isitimela sihambe ngokushesha 19 / 06 / 2012 Intuthuko yaseChina emkhakheni wokuthutha iyaqhubeka ngesivinini esisheshayo. Inhloso entsha yabanjiniyela baseShayina ukwenza isitimela esingahamba ngesivinini se-1000 km ngehora. I-China, izwe elinabantu abaningi kakhulu emhlabeni, lenza izimali ezinkulu ezitimeleni ukuze zinqobe izinkinga zokuhamba. Njengoba inani lamafutha lisanda futhi ukwanda kwamanani, ukubaluleka kwezitimela zikagesi kuyanda. Ngomsebenzi omusha ohlanganyelwe owenziwa yi-Chinese Academy of Sciences kanye neChina Academy of Engineering, umqondo wokuthutha umphakathi ngesitimela ungashintshwa ngokuphelele. Ngokusho kweBeijing Times, onjiniyela baseShayina basebenza esitimeleni esingahamba nge-1000 km ngehora. Izosebenza kanjani? Izincwajana zemininingwane ...
Izitimela ezintsha zikaSamray ezizoqaliswa ngoDisemba 17 / 10 / 2013 Izitimela ezintsha zikaSamray zizofakwa enkonzweni ngoDisemba: I-2010 iyisimiso sokuqala sesitimela sokukhanya eS Samsun. wagubha iminyaka yakhe. Uhlelo lwe-3 luthwele abagibeli abayizigidi ze-3 ngonyaka. Izindleko zeprojekthi cishe zi-47 million euro, ezisekelwa yi-tram 110 kanye nebhasi le-16 futhi liqhutshwa yi-Samsun Transportation Inc. (SAMULAŞ). Ngakho-ke, ngonyaka weRiphablikhi yeRiphablikhi yeRiphabhulikhi yabe isetshenziselwa izakhamizi zendawo Ekuhanjisweni kwezimoto, umgibeli wezigidi ezingu-28 ofika esiteshini wanikezwa izimbali yiSekela likaNobhala Jikelele weMasipala waseSamsun Metropolitan, u-Sefer Arlı. IZIFUNDO EZINTSHA DECEMBER 3 47 izigidi ngonyaka yılda
Isakhiwo se-Gaziantep Airport New Teminal Sizoqaliswa Ku-2020 30 / 12 / 2018 UMehmet Cahit Turhan, uNgqongqoshe wezoThutha kanye nesithintelo, owafika eGaziantep ngochungechunge lokuvakashelwa kanye noxhumana nabo, wahlola imisebenzi eqhubekayo ehlobene nokwandiswa kweGazethi ye-Airport Terminals kanye nokwakhiwa kwesakhiwo esisha sokugcina kanye nokuthola ulwazi oluvela eziphathimandla. UTurhan wenza isitatimende kumalungu ephrinta ngemuva kokuphenya, isakhiwo seGaziantep Airport New Terminal sizovulwa ngonyaka ka-2020 sathi: "IGaziantep yinto ebalulekile ekuthuthweni kwezindiza esiteshini sezindiza ukuze sikhulise i-terminal yethu. I-6 ihlanganisa uhlelo olusha nge-bellows eyengeziwe.
Izinjongo Zezinga eliphezulu Ze-China 1000 Per Hour | maglev
I-China Yethula Umbukiso We-Maglev Isitimela Sokusheshisa I-600 Mileage Ngehora
Izitimela ezintsha zikaSamray ezizoqaliswa ngoDisemba
Isakhiwo se-Gaziantep Airport New Teminal Sizoqaliswa Ku-2020
I-Ankara Niğde Highway izofakwa enkonzweni ku-2020
I-Kayseri High Speed ​​Line izosetshenzwa ku-2020
Ama-patriots wesifazane ayenakekela kakhulu uma usebenzisa izigxobo ezifinyelela ku-70 Tone